अध्यादेश ल्याएर माधवकुमारको ऋण चुक्ता गर्दै देउवा ! « Sagarmatha Daily News
अध्यादेश ल्याएर माधवकुमारको ऋण चुक्ता गर्दै देउवा !
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सार्थक सारथि बन्न सफल भए ।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिनेमात्रै होइन दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले मुलुक हाँक्न नसक्ने सन्देश दिँदै नेता नेपालले देउवालाई सत्तारोहण गराए ।
आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न नेता नेपालले आफ्नो समूहका नेताहरुलाई प्रयोग गरे । सत्तारोहणसँगै देउवा सरकारलाई बलियो बनाउन पार्टीको निर्देशनविपरीत गत असार २८ संसदमा नेता नेपालले एमालेका २२ जना सांसदलाई विश्वासको मत दिन राजी गराए । एमालेका २२ सहित देउवा सरकारले १६५ मत पाएर शक्तिशाली बन्यो ।
आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेको, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर दिएको, पार्टीको निर्णयविपरीत देउवा सरकार विश्वासको मत दिएको, आफ्नो पार्टी र नेताहरुको बद्नाम गर्ने कार्य गरेको आरोपमा नेता नेपालसहित २२ जनालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ । अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई ‘गद्दार र अपराधि’ भन्दै एमालेमा कुनै स्थान रहेको बताएका छन् ।
नेताहरुको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप हेर्दा एमालेमा नेता नेपाल फर्कनभन्दा बाहिरिन सजिलो हुने देखिन्छ । तर, कसरी ? हो यहीँनेर आफूलाई सत्तारोहण गराउन लगाएको ऋण प्रधानमन्त्री देउवाले चुक्ता गर्ने तयारी गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
एमाले फर्कने वातावरण नपाएको खण्डमा नेता नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न सहज बनाउने गरी कानुन ल्याउन प्रधानमन्त्री तयार रहने बताइन थालेको छ ।
तर, संसदको अधिवेशन चलिरहेकाले सम्भव नहुने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको राजनीतिक क्षेत्रमा गाइँगुइँ चल्न थालेको छ । भलै यसलाई कसैले पुष्टि भने गरेका छैनन् ।
पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदमा एमालेको १२१ सदस्य रहेको छ ।
तर, नेता नेपाल संसदीय दलमा कमजोर देखिएका छन् । पार्टी फुटाउन संसदीय दलमा ४९ सांसदको समर्थन जुटाउन नेता नेपालले सक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२, मतदान बहिस्कार गरेका ११ जना र थप तीन जना गरी ३६ जना सांसद नेपाल समूहमा छन् । तर, पार्टी फुटाउन नेता नेपाललाई थप १३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
यदी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसकेको अवस्था नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग सहयोग मागेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन दबाब सृजना गर्न सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेससहित दलहरुले विरोध जनाएका थिए । नेता नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याउने अड्कल र चलेको गाइँगुइँको सत्यता निकट दिनमै थाहा हुनेछ ।